15 akanakisa echimitambo mitambo ye android uye ios
Kuru Nhau & Ongororo 15 akanakisa echimitambo mitambo yeApple neIOS
Wakaneta neisina maturo gem yekupwanya uye shiri kurira? Zvakanaka, nhasi tine akati wandei mitambo inozoshandisa zvirinani uropi hwako panguva yako inotevera yekutamba chikamu. Nharembozha mitambo inosanganisa mazita anonyanyisa mushe-kutamba uye unogona kugara uchiwana inokodzera kuravira kwako. Let & apos; s ipinde mukati mayo!
# 1 Roma: Yakazara Hondo - Bharbar Invasion
Mutengo: $ 4.99
Yakazara Hondo ndeimwe yeanonyanyo kufarirwa maseru mutambo franchise uye vateveri vemutambo vanogona kunakidzwa neyakajairwa Gameplay pane avo mafoni vasina kupa zvakanyanya. Ehezve, iyo diki inoratidzira inoita kuti kumisa mauto ako panhandare yehondo kuome zvakanyanya, asi icho hachisi chinhu chine ruzivo mutungamiriri chisingakwanise kubata nacho.
Mutambo uchakudhurira madhora mashanu asi nekuda kwehunhu uye nehupamhi hwemutambo wauri kuwana nawo, unokosha mutengo.
Download: Android : ios
# 2 Kura humambo: Roma
Mumwe mutambo weRoma-themed zano mutambo, asi uyu haungove wakasununguka chete asi zvakare wakareruka moyo wakareruka nemifananidzo yawo yekatuni. Iyo Gameplay inogona kunyatsotsanangurwa seyakabatanidzwa yeshongwe yekudzivirira uye shongwe mhosva. Iwe unofanirwa kudzivirira guta rako kubva kuvapambi asi iwe unogona zvakare kukunda mamwe mataundi kuti uwane zvimwe zviwanikwa.
Zvinosuruvarisa, sekune mimwe mitambo yemahara yemahara, pane mamwe emari epamusoro anobatanidzwa anogona kutengwa nemari chaiyo, asi kunyangwe pasina iwo, iwe unozogona kukura zvishoma nezvishoma humambo hwako.
# 3 Kubudirira VI
Mutengo: $ 19.99
Rimwe zita rinozivikanwa muchirongwa genre. Semazuva ese, unotanga neguta diki, zviuru zvemakore Kristu asati auya, wotanga rwendo kuburikidza nemazera kusvika wavaka megapolis yemazuva ano. Mutambo uyu ungave wakanyanya kuomarara kune akajairwa gamer asi vateveri vefranchise vanofara kuona kuti nharembozha iri padhuze sezvinobvira kune yavo desktop desktop. Kana iwe ukazviwana iwe uine maawa ekuuraya, Kubudirira VI kuchaita kuti vapfuure mumhepo.
Kana usina chokwadi kana mutambo uyu uri mukombe wako wetii, unogona kutamba makumi matanhatu kutendeuka mahara usati wafunga kana uchida kutenga mutambo wese kana kwete. Nehurombo, Civ 6 ndeye iOS chete izvozvi.
# 4 Hondo Yemauto: Rogue Assault
Mutungamiri wemauto akaiswa munzvimbo yemazuva ano paunopihwa basa rekupedzisa mamishinari akasiyana siyana nechisimba chenyanzvi dzepamusoro. Unogona kudzidzisa zvikamu, kutenga nekuvandudza mota, uye nekuwedzera hwaro hwako. Iwo mavara ari zvishoma retro asi mutambo unovaraidza zvakadaro.
# 5 Zera reOttoman
Kutaura nezvegirafu, Zera reOttoman harizokukanganisa iwe nemaonero aro zvirinani ivo vanopa yakawanda yevaraidzo inosanganiswa nezwi rinoshanda. Mutambo wakanaka paunoverenga, inova iyo hondo. Iwe hausi kuzoona mazana emayuniti achifora zvakateerana, pachinzvimbo, varwi vako vashoma vakavimbika vanofanirwa kushandiswa zvakaringana kuitira kuti vapedze basa rava pedyo.
# 6 Kwayedza kweTitans: Strategy Game
Kwayedza kweTitans iri kune pakatarisana nemagumo eiyo spectrum ichienzaniswa neZera reOttoman. Iwo mavara anonakidza ezita re smartphone uye haungowana chete kudzora mauto emayuniti, asi zvakare une titan parutivi rwako, yakashongedzerwa neakasarudzika hunyanzvi uye kugona. Pane zvakawanda zvinoitika kumutambo uyu, zvinosanganisira kugadzira dhorobha rako uye nekutarisa kune vamwe vatambi vari padhuze newe.
DomiNations mutambo unonakidza unotarisa unotevera zano rakajairika. Iwe unovaka guta rako, tumira mauto kunoparadza uye kupamba mamwe mataundi kuitira kuti ugone kudzidzisa mamwe mauto, kusimudzira zvivakwa uye kuvhura ese marudzi ezvekunaka. Iwe une kwakawanda kutonga pamusoro pehondo kupfuura zvakajairwa nerudzi urwu rwemutambo, saka zvirokwazvo pane humwe hunyanzvi hunobatanidzwa. Uyu mutambo hausi wekumirira nguva chete kuti uwane masosi zviwanikwa zvinodiwa zvezvinhu iwe zvaunoda kuita.
Mutengo: $ 0.99
MechCom 3 ndeye chaiyo-nguva zano ine yakareruka unit dhizaini uye Gameplay iyo inokuyeuchidza nezve StarCraft. Iwe unounganidza zviwanikwa, unovaka mafekitori uye zvikamu uye woedza kukunda munhu wako weAI anopikisa ari kuita zvakafanana kumwe kunhu pamepu. Kubva kuma micromanaging mayuniti kusarudza tech miti, uyu mutambo unopa zvese zvaunogona kutarisira kubva kuRTS. Chikamu chakanakisa ndechekuti kunyangwe uchidhura chete dhora, mutambo uyu hauna kushambadzira kana kutenga-mu-app.
Imwe StarCraft-yakafuridzirwa RTS mutambo uine inotonhorera-inotaridzika mifananidzo yekatuni. Mushandirapamwe mukuru unopa mamishini makumi maviri nerimwe anowedzera kuomarara uye kunetsa. Mutambo uyu unoda kuti iwe uuye nezano rekugadzira kana iwe uchida kupedzisa zvese zviripo zvirimo. Iron Marines inokupa iwe maawa akawanda ekuvaraidza mutambo wemitambo uye vanogadzira vanoramba vachivandudza pane iyo.
# 10 HondoPlans
HondoPlans inokutora iwe kuenda kune yakagadzirirwa-ngano nyika kwaunorwira kutonga pamusoro pezvitsuwa, uchipfuura nepakati padzo pamusana pemakamba makuru. Iwe unounganidza zvikwata zvako, sarudza kwaunoenda kuti ukunde uye wotanga kuparadza dziviriro yemuvengi. Mushure meizvozvo kunouya chikamu chakanakisa, kutora zvakapambwa uye kusarudza maitiro aunoda kuishandisa.
Sezvaunofambira mberi, hondo dzinozove dzakaoma uye kukunda kunonetsa kuwana, saka iwe zvirinani uve wakangwara nezvekuti urikukudziridza sei mauto ako!
Badland Brawl iri kutambanudza tsananguro yemitambo yemitambo zvishoma asi zvinonakidza kutamba saka takaikanda musarudzo futi. Uchishandisa mubatanidzwa wemagadget uye zvikamu chako chinangwa ndechekuparadza shongwe yemupikisi wako asati aita zvimwe chete kune zvako. Kuvandudzwa uye zvombo zvinogona kuwanikwa nekuvhura mazai (anonyanya kupaza mabhokisi). Nepo mutambo uine zano rakareruka, uchafanirwa kukurumidza uye kururamisa nekufamba kwako uye uve nehurongwa hwakasimba hwakagadzirirwa kare kana uchida kuunza kuparadza zvinobudirira.
# 12 Denda Inc.
Mutengo: Mahara pane Android, $ 0.99 paIOS
Unorwara neakanaka, ane mavara mutambo wepasirese nemimhanzi yekusimudzira inoenderana nekufamba kwako kwese? Zvakanaka, Dambudziko Inc. chinhu chakasiyana kwazvo nezvose izvozvo. Chinangwa chako chiri nyore: kuuraya munhu wese wepanyika. Sei? Nekugadzira chirwere chekupedzisira chinouraya. Nemhando dzose dzehutachiona uye shanduko inowanikwa iwe unowana, kuunza rufu kune vanhu pasirese ndiyo nzira inonakidza kupfuura iwe waungafungidzira.
# 13 Incursion Shongwe Dziviriro
Sezvazvinova pachena kubva pazita, Incursion Shongwe Dziviriro chikamu cheyakagara-yakakurumbira shongwe yekudzivirira genre. Kunze kwekungoisa shongwe uye kumirira kuti uone zvichaitika, zvakadaro, iwe zvakare unowana kuraira wako mukuru hunhu uye mbwanana yake yakavimbika, padivi pemamwe mauniti akasiyana anogona kufamba nemepu uye kubatsira mupiniki. Iwo matanho ari akasiyana uye akagadzirwa-mushe saka zvinofanirwa kuve zvakaoma kuti ushore.
Auto Chess yakaputika mukuzivikanwa mu2019 uye kubva mukubudirira kwayo kwakaburitsa imwe nyowani nyowani yemazano emitambo. Nekugadzira musanganiswa wemagamba uye maficha uye nekuaisa pane yakasarudzika 8 ne8 chessboard, iwe spar uchipesana nemumwe wevadzivisi vako vanomwe kutenderera kwese. Ndipo panouya chikamu che 'auto', sezvo zvikamu zvinorwa zvega kusvika kwasara nhengo dzechikwata chimwe chete. Ehe, pane rimwe rombo rakabatanidzwa asi zano remutambi wega wega ndiro rinozopedzisira raunza budiriro kana kukundikana.
# 15 Dota Varidzi
Kungofanana naDota aive wekutanga Warcraft 3 mod, saizvozvowo Auto Chess yakagadzirwa senge mod yeDota 2 pakutanga. Kamwe vagadziri pavakagadzira yakamira Auto Chess, Valve yakakurumidza kugadzira Dota Underlords. Iyo mitambo yakafanana asi Valve yaunza zvimwe zvakasarudzika maficha kune Underlords uyezve, inoshandisa anozivikanwa magamba uye hunyanzvi kubva kuDota 2.
Ose maDota Underlords uye Auto Chess anozivikanwa zvakanyanya izvozvi saka vanopikisa zviri nyore kuwana uye mitambo yako ichatanga pasina kunonoka kukuru.
iwe zvino wakabatanidzwa pane mutumwa
samsung galaxy s5 kukurumidza kuchaja
Kukurumidza kuchaja kwakakosha kupfuura hupenyu hwakareba hwebhatiri
Walmart mutengi akatsamwa mushure mekunge yake iPhone 6 odha yeChishanu Chishanu yabviswa
Ungachinja sei mafonti pane Android uine kana usina mudzi
Samsung Gear Fit 2 kusimba bhendi Ongororo
YouTube Music 'Replay Mix' playlist, yakafanana neSpotify & apos; s 'On Repeat', iri kuburitswa kune vashandisi
Samsung & apos; s foni nyowani nyowani yeAT & T inouya nebhatiri rinobviswa uye mutengo usinganzwisisike
Makesi akanakisa emhando yepamusoro eSamsung Galaxy S7 kumucheto
Super Mario Run: maitiro ekuvhura ese matanhatu mavara anotamba (Mario, Peach, Luigi, Toad, Yoshi, Toadette)
Iyo $ 1380 Galaxy Z Flip ichave ichiwanikwa pazvitoro zveAT & T pazuva rekuburitsa